Araka ny voalazan'i Duncan Laurens, ny kintana vaovao Davina Michelle dia tokony handray anjara amin'ny Eurovision Song Contest amin'ny herintaona amin'ny anaran'i Holandy. I Davina dia mifarana amin'ny a a. "Eny sy izany?" Ary mety ho mpandika teny izy. Nohazavaiko tao amin'ny lahatsoratra maromaro (ohatra eto) fa ireo anarana izay mifarana miaraka amin'ny iray dia matetika ampiharina amin'ny olona mpandika lalàna. Efa [...]
Total visits: 13.774.014
Martin Vrijland op Ahoana no ahafahanao manery ny governemanta hiova nefa tsy miraharaha ireo vahoaka?
Nahoana ianao no te hahalala an'izany? op Ahoana no ahafahanao manery ny governemanta hiova nefa tsy miraharaha ireo vahoaka?